Wararka Maanta: Sabti, Apr 7 , 2012-Kooxda Kubadda Cagta SYS ee Magaalada Eskilstuna ee dalka Sweden oo maamuustay sanadguuradeedii koowaad
Kooxda Kubadda Cagta SYS ee Magaalada Eskilstuna ee dalka Sweden oo maamuustay sanadguuradeedii koowaad Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Munaasabad lagu maamusayay Kooxda SYS (Ex Skiftinge) oo sanad jirsatay ayaa lagu qabtay Magaalada Eskilstuna ee dalka Sweden, iyadoo munaasabaddana ay ka qeybgaleen bahda Isboortiga Magaalada, saxafiyiin iyo siyaasiyiin.
Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay Guddoomiyaha Kooxda Maxamed Cumar oo soo dhaweeyay dadkii munaasabadda ka soo qeybgalay, sidoo kalena u mahadceliyay intii ay soo wada shaqeeyeen ee kooxda SYS (Ex Skiftinge).
Sidoo kale waxaa ka hadlay Afhayeenka Kooxda Sakariye Cabdi oo aad ugu dheeraaday ka hadalka taariikhihii kala duwanaa ee ay kooxda soo martay, magaceedii hore ee Skiftinge sida uu ku yimid halka ay gaareen iyo ugu dambeyntiina ay garteen in ay la baxaan magaca SYS (Somali Young Stars).
Waxaa kale oo xafladda ka hadlay Maxamed Khadar oo ah xoghayaha guud ee Ururka Somaliska Ungdomar Nätverk (SUN), wuxuuna ka hadlay isku dhalinyarada degmada Eskilstuna iyo dhaqdhaqaaqyada Isboorti ee jira Magaalada Eskilstuna. Intii xafladda socotay ayaa waxaa la cambaareeyay dadkii ka dambeeyay qaraxii maalmo ka hor Muqdisho ka dhacay, kaasi oo ay ku dhinteen mas’uuliyiintii Isboortiga Soomaaliya, gaar ahaan Guddoomiyaha Guddiga Olombikada Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarow Wiish iyo Guddoomiyihii Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta Saciid Maxamuud Nuur Mugaambe.
C/qaadir Maxamuud Walaayo oo ah siyaasi iyo saxafi Soomaaliyeed ayaa isna munaasabadda ka hadlay, wuxuuna ku dheeraaday waxtarka dhalinyarada iyo sida ay qowmiyadaha ugu sameeyaan isbedellada, wuxuuna tusaale u soo qaatay halgankii gobonimo-doonka Soomaaliya oo ay horseed ka ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah oo ay dhalinyaradu ka sameeyeen isbedello.
Waxaa uu guubaabiyay C/qaadir Walaayo dhalinyarada Isboortiga Magaalada Eskilstuna oo uu ka codsaday in ay ku dadaalaan sidii ay isbedel u sameyn lahaayeen, dalkooda iyo dadkoodana ay wax ugu qaban lahaayeen. Dhanka kalena C/qaadir Walaayo oo sheegay in muddo 10 sano ka badan uu soo ahaa afhayeenka Guddiga Olombikada Soomaaliyeed waxaa uu ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid mas’uuliyiintii Isboortiga Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxii maalmo ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay Macallin C/risaaq oo ka socday Ururka Cross Cultures wuxuuna dhalinyarada magaalad Eskilstuna u jeediyay hadal gubaabo iyo niyad-dhiska iyo sida ay ugu guuleysan karaan hadafkooda ah in ay kubadda cagta ka gaaraan meel sare. Macallin C/risaaq oo uu ururkiisa kubaddo ugu deeqay Kooxda Kubadda Cagta SYS waxaa uu Ururrada magaalada ka codsaday in ay dhiirigeliyaan oo ay maalgeliyaan kooxda SYS.
Sidoo kale waxaa Munaasabadda ka hadlay Simon Cali iyo M3 oo ka mid ah mas’uuliyiinta Isboorti ee aadka u firfircoon, waxayna labaduba dhiirigeliyeen kooxda Kubadda Cagta SYS, iyagoo dib u qooraansaday heerarkii kala duwanaa ee ay kooxda soo martay iyo halka ay taagan tahay.
Gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa lagu bixiyay abaalmarinno la guddoonsiiyay ciyaaryahanka ugu fiican, difaaca iyo qadka dhexe iyo dad kale oo abaalmarinta lagu siiyay dadaallo dhinaca Isboortiga ah oo ay sameeyeen.Salaad Iidow Xasan (Xiis), Hiiraan Onlinesxiis@hiiraan.com
Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Waxaa magaalada Stockholm ee caasimadda ee dalka Sweden lagu qabtay kulan ballaaran oo loogu talagalay in loogu baroordiiqo madaxdii sportiga iyo dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Golaha Murtida iyo Madadaallada ee magaalada Muqdisho arbacadii la soo dhaafay. Bahweynta sportiga dalka Sweden ayaa soo qaban qaabiyey kulanka tacsida ah, waxaana ka soo qeyb galay dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Stockholm iyo nawaaxigeeda. Al-shabaab oo sheegtay inay xoogageedu weli gudaha Muqdisho kula dagaalamayaan AMISOM iyo Dowladda KMG ah 4/7/2012 3:21 AM EST